ကျနော်တို့ da Supa Bowl ကိုသွား! | Martech Zone
ကျနော်တို့ da Supa Bowl ကိုသွား!
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန်နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၂ တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါ့သား၊ ဘီလ်နှင့်သူ့သူငယ်ချင်းယာရက်သည်ဤရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကိုအတူတကွထားခဲ့သည်…“ ငါတို့ Supa Bowl ကိုသွားကြမယ်!” ဘီလ်သည်ဂစ်တာနှင့်ရောစပ်ပြီး၊ ယာရက်သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အသံနှင့်ကေတီသည်အရန်သီချင်းအနည်းငယ်သာပြုလုပ်သည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများအတွက် Colt, Pat နှင့် AJ တွင်ဖြစ်သည်။ ငါ့သားဒီပစ္စည်းပစ္စယမှာတကယ်ကိုကောင်းတယ်! သင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်ဤနေရာတွင်ကူးယူနိုင်သည်။
Douglas Karr Wednesday, January 31, 2007 Sunday, October 4, 2015
တိုနီ Clark Clark
1:2007 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 9, 57
အရမ်းအေးတယ်! ငါမသိဘူးဆိုရင်ငါ Satch လို့ထင်လိမ့်မယ်